Publié parfilazantsaramada	 octobre 12, 2012 octobre 12, 2012 Laisser un commentaire sur
TE HANASITRANA ANAO NY TOMPO JESOSY!
Ho famerenana indray ny fihavanana dia mbola Andriamanitra ihany no manao ny dingana voalohany: « Ary nampianatra teo amin’ny synagoga anankiray Jesosy tamin’ny sabata. Ary indro, nisy vehivavy izay nanana fanahy maha-farofy valo ambin’ny folo taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy, dia niantso azy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, afaka amin’ny rofinao hianao. Dia nametraka ny tànany taminy Izy; ary niaraka tamin’izay dia nitraka ravehivavy sady nankalaza an’Andriamanitra. »Lioka 13:10-13
-Onena Andriamanitra noho ny aretintsika: eto na dia nampianatra aza i Jesosy dia hitany ity vehivavy niditra, nanjoko noho ny aretina. Tsy variana fotsiny Jesosy nampianatra fa hitany ny nanjo ity vehivavy ity.
-Ao anatin’ny sarotra indrindra no indro Jesosy miantso antsika: « Ary rehefa nahita azy Jesosy, dia niantso azy ». Ny tokony hampahery antsika dia: mahita antsika ny Andriamanitsika. Ary na dia ao anatin’ny fahoriana aza isika dia hitany tokoa. Eo amin’izany fahoriana izany indrindra aza no akaiky antsika Izy: Mpamonjy mora azo amin’ny fahoriana Izy. Jesosy niantso ilay marary: rehefa manana ny toerana ambony ny olombelona dia matetika misy izay avona izay ao anatiny, asa noho ny faneren’ny zava misy eo amin’izany toerana izany angamba ka lasa miavona; Jesosy anefa na dia manana ny voninahitra rehetra, Izy no anton’izao rehetra izao,
dia Izy mihitsy no manao ny dingana, miantso ilay marary. Raha ny marina dia ny marary no manatona ny mpitsabo, fa eto kosa dia ny mpitsabo no miantso sy manao ny dingana miantso ilay marary. Malemy fanahy Ilay Tompontsika.
-Mampiseho ny finoana ao anatiny Jesosy, ary mampiharihary ny fahefana ao aminy izany finoany izany: « Ravehivavy, afaka amin’ny rofinao hianao » . Mino Izy fa afaka manasitrana ny aretin’ity vehivavy ity: « afaka amin’ny rofinao hianao »
-« Dia nametraka ny tànany taminy Izy; ary niaraka tamin’izay dia nitraka ravehivavy sady nankalaza an’Andriamanitra. » Mampahatsiaro ilay tenimpahefana ao amin’ny Filazantsaran’i Marka 16:18 hoe « Hametra-tànana amin’ny marary izy dia ho sitrana ireny ». Nomena an’i Jesosy ny fahefana rehetra any andanitra sy ety antany, ka nomeny fahefana koa ny mpianatra hanohy ny asa
nataony teto amin’izao tontolo izao.
Mazàna ny olona, rehefa sitrana ny nofony dia manadino ny fanasitranana ny fanahiny, hany ka toa filàna tombony aranofo ihany ny fanasitranana azo. Ny eto anefa dia sitrana koa ny fanahin ity vehivavy ity: « Sady nankalaza an’Andriamanitra izy ». Tena sarobidy amin’Andriamanitra ny fanasitranana ny fanahintsika. Marina fa manasitrana ny nofontsika Izy, nefa ny fanasitranana ny fanahintsika no tena sarobidy aminy. Rehefa mahazo fanasitranana ary ny olona dia tokony ahatsiaro ny hanolotena ho an’Andriamanitra mba hahazo fanasitranana koa ny fanahy. Ny aretina aza dia mety ho fiantsoana ny olona iray ho amin’ny fiainana mandrakizay, ka mety ahazoany fanasitranana ara-nofo , fa indrindra ny fanasitranana ara-panahy!
Misy ary ve aretina manjo anao ankehitriny? Misy ve zava-tsarotra mihatra eo amin’ny fiainanao izao? Mety ho fahoriana no mihatra aminao? Indro izao ankehitriny izao Jesosy miantso anao: Afaka amin’ny rofinao hianao! Afaka amin’ny zavatsarotra manjo anao hianao! Miantso anao jesosy izao ankehitriny izao! Te hanasitrana anao Izy, te hamaha ny olana misy eo aminao Izy; Te hanala anao amin’ny fahafatesana mandrakizay Izy. Valio ny antsony izao anio izao!
Publié parfilazantsaramada octobre 12, 2012 octobre 12, 2012 Publié dansUncategorized